Ganacsiga wuxuu bixiyaa $ 9 milyan oo kiro iyo kaalmo tamar si loogu adeego qiyaastii 5,000 qoys oo dakhligoodu hooseeyo - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Ganacsiga wuxuu bixiyaa $ 9 milyan oo kiro iyo kaalmo tamar si loogu adeego qiyaastii 5,000 qoys oo dakhligoodu hooseeyo
Ganacsiga wuxuu bixiyaa $ 9 milyan oo kiro iyo kaalmo tamar si loogu adeego qiyaastii 5,000 qoys oo dakhligoodu hooseeyo
Dadka degan gobolka Washington ee hadda kaqeyb galaya Barnaamijka Caawinta Dakhliga Hooseeya iyo Barnaamijka Caawinta Tamarta (LIHEAP) ayaa dalban kara waxtarrada dhibaatooyinka gaarka ah
OLYMPIA, WA - Waaxda Ganacsiga usbuucii la soo dhaafay waxay bixisay ilaa $ 1,000 kaalmo kiro ah iyo ilaa $ 500 kaalmo tamar ah oo loogu talagalay qoysaska u qalma Barnaamijka Caawinta Tamarta Guriga ee Dakhliga-Hoose (BEENTA). Maalgelinta dhibaatada waxaa loo qaybin doonaa iyada oo loo marayo shabakadda ganacsiga ee gobolka oo dhan ee hay'adaha waxqabadka bulshada, waxaana la filayaa in ay u adeegto qiyaastii 5,000 qoys oo u qalma.
“Ka feker inaadan haysan lacag kugu filan oo aad ku bixiso kirada, biilka kuleylka, oo aad cuntada miiska u saarto. Kumanaan qoysas ah oo ku nool Washington ayaa wajahaya xaaladdan adag, Cudurka faafa ee COVID-19 wuxuu sii xumeeyay dhibaatadan ka taagan gobolkeenna, ”ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown. "Waxaan la shaqeyneynaa la-hawlgalayaasheena si aan u kala qaadno deeqdan sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah."
Hay'adaha waxqabad ee bulshada ayaa lacagta u qaybin doona marka horeba, marka horeba loo adeego, ilaa iyo inta amarka Badhasaabka ee "Guriga Joog, Caafimaadkaaga ahaada" uu jiro. $ 9 milyan ee la heli karo, 15% ayaa loo heli karaa kaalmada kirada. Kireystayaasha ka dambeeya kirada oo la kulma shuruudaha kale ee faa'iidooyinka dhibaatooyinka waa inay ka codsadaan hay'addooda waxqabadka bulshada. Haddii la oggolaado, bixinta kaalmada kirada waxaa si toos ah loogu samayn doonaa kireeyaha.
Sidoo kale, kuwa aan awoodin inay iska bixiyaan biilasha tamarta waa inay ka dalbadaan hay'adda waxqabadkooda bulshada. Markii la ansixiyo, macaashka waxaa la siiyaa danabka u adeega reerka u qalma.
Ayaa codsan kara iyo sidee
Si aad ugu qalanto faa'iidooyinka COVID-19 ee dhibaatooyinka LIHEAP, qoysku waa inuu ahaadaa 125% heerka saboolnimada federaalka oo uu helay - ama helayaa - LIHEAP ama Barnaamijka Caawinta Dakhliga Yar ee Dakhliga (LIRAP) ee barnaamijka sannadkan socda (Oktoobar) 2019 - Oktoobar 2020).
Sanadkii la soo dhaafay, LIHEAP waxay u kala dirtay celcelis ahaan gargaarka kirada ee $ 800 ilaa 430 qoys.
Sanadka 2019, qoys ka kooban afar, oo dakhligoodu sanadkii yahay $ 32,188, ama dakhli bille ah $ 2,682, ayaa uqalma barnaamijka. Eeg Tilmaamaha U-Qalmitaanka LIHEAP
Si aad u ogaato haddii aad u-qalanto gargaar, la xiriir hay'adda waxqabadka bulshada ee deegaankaaga. Khariidad is-dhexgal leh oo leh macluumaadka xiriirka waa halkan ku xiran.
Ganacsigu wuxuu hirgaliyay isbedello siyaasadeed oo ku meelgaar ah si loogu oggolaado dhaqso loo qaybiyo lacagtaan, iyadoo aan lala xiriirin shaqsi ahaan. Hay'adaha waxqabadka bulshada waxay dukumintiyada ku aqbalayaan boostada, emaylka, fakiska, qoraalka ama taleefanka. Ganacsigu wuxuu barnaamijka ku hirgeliyey maalgelin la heli karo hadda iyadoo la filaayo inay dhowaan hesho deeq-lacageedka dowladda federaalka ee Coronavirus Aid, Relief, iyo Economic Security Act (CARES Act).
War-saxaafadeedXoojinta bulshadaWasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
← Gaarsiinta intaad Joogtid Guriga, Ku dadaal Hindisaha Caafimaadka Ganacsigu wuxuu siiyaa barnaamij cusub ScaleUp si looga caawiyo ganacsiyada yaryar inay ku guuleystaan ​​dhaqaalaha COVID-19 →